सावधान ! सेक्स टोयबाट हुँदैछ जासुसी | Tourism of Nepal
सावधान ! सेक्स टोयबाट हुँदैछ जासुसी
सेक्स टोय बनाउने क्यानडाको एक कम्पनीमाथि आफ्ना हजारौं ग्राहकको व्यक्तिगत गोपनीयतामाथि जासुसी गरेको आरोप लागेको छ ।
ओटावास्थित स्टेन्डर्ड इनोवेशन नाम गरेको कम्पनी विरुद्ध स्थानीय एक अदातलमा मुद्दा दर्ता भएपछि कम्पनी अमेरिकी उपभोक्ताहरुलाई ४० लाख क्यानेडियन डलर सामुहिक भुक्तानी दिन बाध्य भएको छ ।
यो घटना पछि अब प्रश्न उठेको छ, अन्य सेक्स टोय उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई के होला ? के यो घटना पछि अति व्यक्तिगत गोपनीयता एवं सुरक्षाका लागि नयाँ उपाय सोच्न थालिएको छ ।
स्टैंडर्ड इनोवेशन मामिलाको मुख्य जड यौटा एप्लिेकशन ‘ऐप’ थियो । भी–कनेक्ट ऐप ‘भी–वाइव भाइब्रेटर’सँग जोडिएको थियो । यसको माध्यमबाट कम्पनीले आफ्ना उपभोक्ताको सेक्ससँग जोडिएको आदतका जानकारी पठाउने काम गर्दथ्यो । यसमा तापक्रम, सेटिङ्ग्स एवं उपयोगसँग जोडिएका कैयौं जानकारी समेत हुन्थ्यो ।
सेप्टेम्बर २०१६मा ग्राहकले कम्पनीले व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै क्यानेडेली अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । यसैसाता कम्पनीले २६ सेप्टेम्बर २०१६ भन्दा पहिला सेक्स टोय किनेका अमेरिकी ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिन सहमत जनाएको छ ।
फैसला अनुसार जसले भी कनेक्ट ऐपको उपयोग गर्दथे उनीहरु सबैले अब १०–१० हजार क्यानेडिन डलर क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । जुन ग्राहकले सेक्स टोय खरिद गरेका थिए तर त्यससँग जोडिएको भी–कनेक्ट ऐप अब एक्टिभेट भैसकेको थिएन, उनीहरुले पनि १९९ डलर क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । तर, यो सम्झौता अमेरिकी ग्राहकलाई मात्र लागु हुनेछ । सेक्स टोय कम्पनी स्टेण्डर्ड इनोभेसनले अब सबै प्रकारको सुरक्षा मापदण्डलाई पालना गर्ने पनि जनाएको छ ।
सेक्स टोयमा ऐपको आवश्यकता किन ?
भी–कनेक्ट ऐपले उपभोक्ताको मोबाइल फोनबाट डिभाइसको तिब्रतालाई नियन्त्रित गर्न सक्षम बनाउँछ । ब्लू टूथ प्रविधिको माध्यमबाट दोस्रो प्रयोगकर्ता पनि आफ्नो सेक्स टोयलाई एक्टिभेट गर्न सक्छन् ।
स्टैंडर्ड इनोवेशनका अनुसार उसले आफ्ना उपभोक्ताहरुबाट लिएको डाटा मार्केट रिसर्चको लागि जम्मा गरेको थियो । ‘तर केही उपभोक्तालाई लाग्यो कि यसबाट उनीहरुको गोपनीयता भंग भयो ।’
मुद्दामा यो पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो कि जुन कम्पनीले इमेल आईडी उपलब्ध गराएको थियो, उसबाट यी सूचनाहरु जोडिन सक्थ्यो । यद्यपी, कम्पनीले आफ्ना उपभोक्ताको गोपनीयतामाथि कुनै धोखाधडी नगरेको दाबी गरेको छ । कम्पनीले आफुले संकलन गरेको डाटा व्यक्तिगत प्रयोगमा नगरेको बरु आम प्रचलनको रुपमा लिएको दाबी गरेको छ ।
ब्रिटिश रिटेल चेन एन समर्सलाई सेक्स टोयको मामिलामा माहरथी नै मानिन्छ । यसका अनुसार बजार प्रविधिले भरिपूर्ण भएको छ । त्यसैले नयाँ प्रयोग त गर्नुपर्छ । एन समर्स सन् ७० को दशकदेखि चलिरहेको छ । यसको प्रवक्ता किर्सटी हेजेलका अनुसार उनीहरुको उत्पादनमा भने भाइव्रेशन हुँदैन । पछि ब्याट्ररीको ठाउँमा यूसभी चार्जर लगाउन थलियो । र यसपछि यस्तो खाले ऐप हरु आउन थालेका हुन् । अब सेक्स टोयलाई सम्पूर्ण प्रविधि युक्त बनाइन थालिएको छ ।
ब्रिटिश रिटेल चेन एन समर्सले घटनालाई अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । यसका प्रवक्ताले बताएकि छिन्, ‘हामीहरुका लागि आफ्ना ग्राहकको सुरक्षा महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो । हामी उनीहरुको सुरक्षा एवं डाटा दुबैको ख्याल राख्नु पर्छ ।’
-विकी बेकर, बीबीसी न्यूज़
भूतसँग सेक्स ! एक्ट्रेस नतासा ब्लासिकले पाइन स्वर्गीय आनन्द